Akụkọ - Creatmepụta mpaghara ngwaahịa ọhụụ n'èzí
Na Mee nke 2020, The Besttone co., Ltd guzobere ngalaba ọhụrụ- Ngalaba na-echebe ngwaahịa n'èzí. Malite nyocha na imepụta ngwaahịa nchebe n'èzí.
Afọ 20 gara aga, The Besttone etoola n'ime nnukwu ụlọ ọrụ zuru oke na nke tozuru etozu maka uwe nyocha na mmepe. Daily ikike bụ ihe karịrị 1000pcs maka uwe na-adị kwa ụbọchị nkpuchi ngwaahịa ikike karịrị 10000 PC. Mgbe achịkọta dị iche iche ihe onwunwe, na site na nkukota nke ike na tozuru okè technology, ụlọ ọrụ chie banye ọhụrụ mmepụta ijiji na-amalite mmepe nke n'èzí nchedo ngwaahịa. Mmepụta gụnyere: uwe n'èzí na ngwa nchekwa ndị ọzọ dị n'èzí, dị ka uwe aka, ikpere ụkwụ, eriri aka, ikpere aka, nkpuchi, nkpuchi ihu, akpa azụ, akpa akwa, akpa aka, okpu na-ekpo ọkụ, akwa mkpuchi, ụlọikwuu, akpa ụra, matarasị, akpa akpa , mmiri ozuzo na na na. All mmepụta nwere ike iru mba quality ọkọlọtọ. Anyi nwekwara ike iweputa ihe obula onye ahia choro. Nke a bụ ngalaba anyị: ngalaba ịhazi onwe onye. Ọ pụtara na anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa nke onye ahịa chọrọ. Naanị ịkwesịrị ịgwa anyị aha ngwaahịa, agba, nha na ebumnuche. Mgbe ahụ, anyị ga-amalite ịrụ ọrụ site na ịmeere gị otu nyocha. O doro anya na ọ ga-agụnye ihe ziri ezi, nha ziri ezi na nzube kacha mkpa dị mkpa ruo mgbe afọ ju gị.
N’oge a, egwuregwu n’èzí abụrụla ihe ama ama na mmụba nke ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ikike ibi ndụ ndị mmadụ. Ọtụtụ mmadụ na-amalite itinyekwu uche na ịnwale ihe ndị a na-eme n'èzí. Ọ gụnyere ịgba ọsọ, ịgba ịnyịnya ígwè, ịrị ugwu, ịzọ ije, wdg. Na United States, egwuregwu n'èzí bụ egwuregwu nke atọ kachasị ewu ewu na nsonye na nsonaazụ. A mara England mgbe niile dị ka "ụlọ egwuregwu", ọ bụkwa ebe a mụrụ dị mkpa nke egwuregwu asọmpi nke oge a. Ugbu a, egwuregwu n'èzí dị ka egwuregwu dị mma maka oge ezumike, bụ ụzọ egwuregwu na-akwụghị ụgwọ na nkịtị yana and na-ewu ewu site na mba ọ bụla ọha na eze. Site na mmepe nke mba ọ bụla, egwuregwu n'èzí aghọwo ụzọ kachasị mma maka oge ntụrụndụ maka ndị mmadụ n'ụwa nile. Ọ bụ ya mere anyị ji mepụta ngwaahịa dị n’èzí. Anyị na-atụ anya na ngwaahịa anyị dị n'èzí ga-eto n'ike n'ike nke egwuregwu n'èzí.
Ya mere, Besttone anyị nwere otu ndị na-eme nchọpụta ọhụrụ, ma nwee ndị ọrụ raara onwe ha nye, nwekwara ọrụ na-ekpo ọkụ maka afọ 20, jiri obi eziokwu nabata ndị ahịa na ndị enyi niile na-abịa ụlọ ọrụ anyị ileta na ịkwado. Anyị ga-alọghachikwute gị kachasị mma mmepụta na ọrụ kacha jiri obi eziokwu arụ.